बलिउडमा सबैभन्दा धनी अभिनेता बने अक्षयकुमार, ‘एउटै फिल्मवाट लिन्छन् यति धेरै पारिश्रमिक’ – Ujyaalo Patrika
बलिउडमा सबैभन्दा धनी अभिनेता बने अक्षयकुमार, ‘एउटै फिल्मवाट लिन्छन् यति धेरै पारिश्रमिक’
बलिउडको सबैभन्दा धनी अभिनेता अक्षयकुमार बनेका छन् । हालसालै फोर्ब्सले जारी गरेको सूचीमा बलिउड अभिनेतामा सबैभन्दा धनी ब्यक्तिमा अक्षय कुमारको नाम छ । अनुसार उनी बलिउडमा सफल फिल्म दिने कलाकार हुन् । फिल्मवाट गरेको प्रगतीले उनी बलिउडमा सबैभन्दा धनी अभिनेता बन्न सफल भएका छन् । फोब्सका अनुसार उनले आफ्नो पारिश्रमिक पनि बढाएका छन् ।
उनको पारिश्रमिक पनि कल्पना भन्दा पनि धेरै छ । उनले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर प्रतिफिल्म १२० करोड पुर्‍याएका छन्। उनले आफूले तोकेको पारिश्रमिक घटाएर कुनै पनि फिल्ममा काम नगर्न बताएका छन्। हालै उनले १० वटा फिल्म साइन गरिसकेका छन् । एउटा फिल्मवाट पाउने पारिश्रमिक हिसाव गर्दा आगामी १० फिल्मबाट उनको आम्दानी १२ सय करोड पुग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
केही समयअघि अक्षय कुमारले फिल्म ‘लक्ष्मी’ बनाए । जुन फिल्म डिज्नी हटस्टारलाई ११० करोडमा बेचेका छन् । तर यसले निर्माता र डिजिटल कम्पनीले पनि उल्लेख्य फाइदा उठाउन नसकेको बताइएको छ। तर, अक्षय कुमारका अन्य कुनै पनि फिल्म इन्टरनेटमा रिलिज भएका छैनन्।
उनका सबै चलचित्रहरू हलमा रिलिज हुने भएका छन्। यी चलचित्रहरूले आफ्नो लागत उठाउने नउठाउनेमा शंका रहे पनि अक्षयले आफूले कडा मेहनत गरेको भन्दै शुल्क लिएका छन्।
अक्षयले हालै ‘हाउसफूल ५’ का लागि १२० करोड पारिश्रमिक माग गरे र निर्माण युुनिटले उनको माग पनि पूरा गर्‍यो। फिल्मको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि हाउसफूल सिरिज सबैभन्दा सफल सिरिजका रुपमा रहेको छ।
यसका अलवा अक्षयले मुदस्सर अजिजको नाम फाइनल हुन बाँकी रहेको कमेडी फिल्म, प्रियदर्शनको ‘फिर हेरा फेरि ३’, त्यस्तै ‘अन्तरंगी रे’, ‘राम सेतु’, ‘रक्षा बन्धन’, ‘पृथ्वीराज’, ‘बेलबटम’, ‘बच्चन पाण्डे’ र एकता कपुरको नाम टुंगिन बाँकी रहेको नयाँ फिल्म गरी १० फिल्म साइन गरिसकेका छन्। यी सबै फिल्ममा उनले १२० करोड पारिश्रमिक लिने गरी साइन गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन्।
Previous किन यति प्रिय भए पल शाह ?
Next के ’यो’, नीको आकारले ’यौ’, न स,न्तुष्टिमा फरक पर्छ ? थाहा पाउनुहेास